20 nyore origami mhizha | Crafts On
20 nyore origami mhizha
Elizabeth Catalan | | Kadhibhodhi mhizha, Mapepa emhizha
Mufananidzo| mubatsiri kuburikidza nePixabay
La origami inyanzvi yekugadzira mapepa emapepa asina glue uye pasina kucheka. Hunewo zvakawanda zvinobatsira. Haisi chete inguva yekuvaraidza zvakanyanya, asi zvakare inokurudzira kubatana kwemaoko uye maziso, inokurudzira kusika uye kurovedza pfungwa.
Kana iwe uchida iyo pfungwa yekudzidzisa hunyanzvi hwako mune ino dingindira uye kutanga nemamodheru akareruka, aya gumi neshanu origami manhamba achakufadza iwe. Zviri nyore zvokuti kunyange vana vanogona kuzviita. Usazvipotsa!
2 Ikati kumeso
3 gava chiso
4 nguruve chiso
5 chiso chenzou
6 chiso che koala
7 Rabheti kumeso
10 Mapepa mapepa mapepa
11 origami yakaita mari
12 Vana mapepa mapepa
13 Pepa chikepe
14 Mapepa mwoyo
15 bepa rakasimuka
16 bepa ninja nyeredzi
17 pepa gonye
18 bhiza repepa
19 bepa tsoko
20 bepa dhadha
A classic of origami ndeyekuita imbwa chiso. Iro rakareruka hunyanzvi iro vana nevakuru vanogona kupinda muchirango ichi. Zvishandiso zvauchazoda zvishoma: bepa uye chiratidzo.
Mune iyo posvo Nyore Origami Imbwa Chiso iwe unogona kuwana matanho ekugadzira iyi diki craft pasina nguva.
Iyo kati ndeimwe yemhuka dzaunogona kumiririra ne origami. Kufanana nehuso hwembwa, haisi hunyanzvi hwakaoma, saka unogona kutanga kudzidzira chirango ichi ne Chiso chekatsi. Sarudza rimwe bepa uye mucherechedzo uye iwe unobva wangova nazvo mumaoko ako. Iwe unogona kuona kuti zvinoitwa sei mune positi Ikati kumeso.
La gava chiso Ndiyo imwe yezvigadzirwa zve origami zvichava nyore kwauri kuita. Yakangofanana neiyo yembwa, saka kana wanga wakanaka pairi, uyu anenge asina kushomeka. Zvishandiso zvauchazoda zvimaka uye mapepa.
Mune iyo posvo Origami gava chiso iwe uchawana iyo iri nyore vhezheni yemhuka iyi asi ipapo unogona kuigadzirisa nekuipenda sezvaunoda.
El nguruve inomiririrwawo mu origami uye ndeimwe yemhuka dziri nyore kugadzira. cherechedza zvakatumirwa origami yenguruve chiso zviri nyore nekuti iwe zvechokwadi uchada kuwedzera kune yako yekuunganidza ye origami zvisikwa. Sezvimwe mune mamwe manhamba, pepa nemakasi zvichava shamwari dzako dzepamusoro.
ari nzou Vanogonawo kumiririrwa ne origami. Uye kwete kuburikidza nehunyanzvi hwakaoma, asi zvakapesana. Nepepa shoma, iwe uchakurumidza kukwanisa kuita chiso chemhuka iyi. Nehunde yake nezvose! mutsamba Origami Nzou Chiso unogona kudzidza kuzviita nhanho nhanho.
chiso che koala
El koala inomiririrwawo mune iyi runyorwa rwe origami manhamba. Kufanana nemamwe manhamba, iyi zvakare iri nyore uye kana uchinge uine silhouette yakagadzirwa nebepa uye mucherechedzo, unogona kuupenda kuti upe humbowo hushoma. tarisa pane iyo post Nyore Origami Koala Chiso kuona kuti zvinoitwa sei.
Chengetedza mamwe pepa rawakasiya nekuita origami kugadzira ichi chakanaka chiso chetsuro zvinounza munzeve. Kufanana nedzimwe nhamba dzawaona kusvika pari zvino, tsuro yacho iri nyore zvakare. Kana iwe uchida kuyedza hunyanzvi uhu, tora chiratidzo, rimwe bepa uye tarisa mirairo yauchawana mune positi. Origami Rabbit Chiso.
Kana zvasvika pakumiririra mhuka ne origami, muviri wose wakakwana kuti utange kudzidzira. Ndiyo nyaya iyi whale. Uchenjeri hwekugadzira chisikwa ichi chiri mumuswe wayo, kunyangwe nerubatsiro rwechidzidzo chauchaona mupositi Nyore Origami Whale hapazovi nedanga richakupikisai. Ingotora bepa nechinyoreso uye… wobva waenda!
Iwe unoda kuedza kugadzira imwe mhuka yemuviri yakazara ne origami? Teerera kune ino curious penguin! mutsamba Nyore origami penguin Iwe une vhidhiyo tutori ine nhanho dzese nemirairo kuti usarasikirwe chero chinhu.
Mapepa mapepa mapepa
Imwe inonakidza uye inobatsira origami craft yaunogona kuita ndeye bepa bookmark zvinokubatsira kuziva chikonzero nei chikamu chebhuku chakaramba chiri mukuverenga kwako chisina kukanganisa mapeji ebhuku. Ichowo chimwe chezvakareruka origami izvo vana vanogona kudzidzira hunyanzvi hwavo muhunyanzvi uhu.
Nemirayiridzo yauchawana mupositi Mapepa mapepa mapepa zvichange zviri nyore kwazvo.
origami yakaita mari
Kana iwe uchifanira kupa chipo, dzimwe nguva kupa mari ndicho chinhu chiri nyore nekuti haufanirwe kukwenya uropi hwako zvakanyanya kuti upe chimwe chinhu. Nekudaro, zvinogona zvakare kutonhora uye zvisina humunhu kune vamwe vanhu. Nokudaro, kana ukaronga kupa mari sechipo uye iwe uchida kushamisa mubatsiri nenzira yepakutanga, unogona kuzvipa nenzira ye origami.
Mune iyo posvo Ipa mari nenzira yepakutanga, uchishandisa nzira ye origami unogona kudzidza kuita runako shavishavi rine tikiti uye nzira ye origami.
Vana mapepa mapepa
Imwe yehunyanzvi hwaunogona kuita neorigami ndeye bepa mobile yevana, chimiro chinoumbwa nemapendenti anofamba mumhepo. Vacheche vanofarira kutarisa aya akanaka uye ane mavara emafoni epepa kubva kumabhedha avo.
Mune iyo posvo Vana mapepa mapepa Iwe unogona kudzidza kugadzira hunyanzvi uhu nezvinhu zvinowanzowanikwa pamba senge shinda kana shinda yakanaka, chigero, makadhibhokisi ane mavara uye matanda epurasitiki.
Imwe yezvinyorwa zvekare zve origami ndeye chikepe chepepa. Muchokwadi, iwe wakambogadzira imwe yekuzvivaraidza kwekanguva. Mukuwedzera, kana yapera inonakidza zvikuru kuiisa kuti ifambe murukova kana tsime. Ndiyo imwe yezvinyorwa zviri nyore kuita origami, saka zvinongotora maminetsi mashoma.
Iwe uchawana hunyanzvi uhu pawebhu Maitiro ekugadzira origami. Iwe unongoda bepa rerectangular saizi kubva munotibhuku kana notebook, kunyangwe kana iwe uchida zvishoma yakasimba unogona kushandisa kadhibhodhi kana kadhibhodhi.
Mufananidzo| Michał Kosmulski kuburikidza neFlickr
Imwe yemifananidzo yaunogona kuita neorigami mwoyo. Vanotaridzika zvakanaka kushongedza zvipo, maforodha kana mabhuku ekunyorera uye zvakare anonakidza kwazvo kugadzira. Saka usazeza, iwe uchave nekunakidzwa kwakawanda kuvagadzirira.
Chii chauchazoda kuti unake izvi mapepa mwoyo? Kunyanya mapepa emavara matsvuku uye kadhibhodhi. Pawebhu Maitiro ekugadzira origami iwe unogona kuona iyo tutori.
Mufananidzo| Giradhi Aroni
Imwe yeakanakisa mhizha iwe unogona kuita ne origami ndeye mapepa emaruva. Kana uri kutanga munyika ye origami, unogona kutya kuti yakaoma zvikuru, asi haisi. Iwe unofanirwa kuzviedza nekuti zviri nyore kugadzira uye mhedzisiro yacho yakanaka. Ruzivo rwakanaka kwazvo rwekupa paZuva raAmai kana Zuva raValentine.
Iwe unogona kuona kuti zvinoitwa sei mune post Pepa Rose pawebhu Maitiro ekugadzira origami. Iwe unozoda bepa dzvuku kana kadhibhodhi kune petals uye girini kana iwe uchida kuiperekedza nedzinde.
bepa ninja nyeredzi
Mufananidzo| nzira yekugadzira origami
Imwe yehunyanzvi hwaunogona kuita neorigami ndeye ninja nyeredzi kana shuriken, ingave setoyi kana sechishongedzo chemurwi wemurwi ninja. Nemapepa mashoma emapepa ane mavara akasiyana unogona kugadzira zvinoshamisa ninja nyeredzi. Pasinei nechimiro chayo, haina huwandu hwepamusoro hwekuoma uye iwe unogona kuzviita mune jiffy. Iwe unogona kuzviona mune iyo post Pepa ninja nyeredzi pawebhu Maitiro ekugadzira origami.
Mufananidzo| Easy Origami
Nepepa shoma uye pasina chikonzero chekushandisa chero maturusi kunze kwemaoko ako pachako, unogona kuita izvi zvakanaka pepa gonye. Makonye magonye anozopedzisira ashanduka kuita zvimwe zvisikwa semashavishavi. Saka nzira yakanaka yekutsanangurira vana kuti mhuka idzi dzinoshandura sei chimiro ndechekuita origami kutanga gonye uye shavishavi. Iwe unogona kuona kuti inogadzirwa sei pane Easy Origami webhusaiti.
Imwe yehunyanzvi inotonhorera yaunogona kuita pabepa ine origami tekiniki iyi musoro webhiza. Izvo zviri nyore kwazvo uye kana iwe watoisa mukudzidzira akati wandei ekare mhizha, iyi haizove chakavanzika.
Ndezvipi zvinhu zvaunoda kuti uite izvi? bhiza repepa? Iyo huru ndeye brown cardstock kunyangwe iwe unogona zvakare kushandisa chena, grey kana dema. Iwe unozodawo chiratidzo chekukwevera chiso chebhiza. Iwe unogona kuona kuti zvinoitwa sei pane Easy Origami webhusaiti.
Ingori bepa rimwe chete rinokwana kugadzira iyi yakanaka origami tsoko, hongu, iwe unozoida kuti ive nemuvara wakasiyana kune yega yega chiso. Zviri nyore kuita uye hazvitore iwe kupfuura maminetsi maviri. Unoda kuona kuti zvinoitwa sei? Paiyo Easy Origami webhusaiti une yakanaka vhidhiyo tutorial.
El bepa dhadha mumwe muenzaniso wakajeka we origami kune vanotanga. Zvinongokutora iwe maminetsi mashoma kuti uwane chiso chedhadha, iyo iwe yauchazoda chena neyero kadhibhodhi kumiririra minhenga nemuromo weshiri iyi. Zvichienderana nehukuru hwekadhibhodhi, iyi ichava dhadha. Iwe unogona kuona vhidhiyo yekudzidzisa maitiro ekuzviita pane Easy Origami webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts uye zvinhu » Kadhibhodhi mhizha » 20 nyore origami mhizha
Mazano echipo eZuva raBaba
Bhari rimwe chete rine chimbuzi bepa roll
Gamuchira hunyanzvi hutsva uye matipi mune yako email.